မြန် မာတွေ ဘာကြောင့် ဆိုင်ပြု တ် သ လဲ ????(မြန်မာတွေကြီးပွားချင်ရင်တော့ ဒီဂါထာလေး နေ့တိုင်းရွတ်။) – media sport
Homeknowledgeမြန် မာတွေ ဘာကြောင့် ဆိုင်ပြု တ် သ လဲ ????(မြန်မာတွေကြီးပွားချင်ရင်တော့ ဒီဂါထာလေး နေ့တိုင်းရွတ်။)
[Zawgyi]မြန် မာတွေ ဘာကြောင့် ဆိုင်ပြု တ် သ လဲ ????
လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။လေး ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါဆိုင်ခွဲတွေထပ်ဖွင့်နိုင်တယ်။
လုပ်ငန်းအထိုင်ကြလို့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကြာရင် ဆိုင်ခွဲအနည်းဆုံးသုံးခုဖြစ်သွားပြီ။
မြန်မာဆိုင်နဲ့ဘေးချင်းယှဉ်လာဖွင့်ရင် မြန်မာဆိုင် သိပ်မကြာခင်ပြုတ်ပြီးပြေးရပြီ။
အလုပ်ချိန်တိကျတယ်။ဆိုင်ပိတ်ချိန်တစ်ခါတစ်ရံမှာသာနောက်ကျတယ်။နယ်အော်ဒါများလို့ ဒီနေ့ဝင်တဲ့အော်ဒါ ဒီနေ့အပြီးထုတ်တယ်။နေ့ကူးရင် နောက်နေ့အော်ဒါတွေထပ်ပြီး ဂျမ်းမဖြစ်စေဖို့ပါ။
သူဌေးကအစ အလုပ်သမားအဆုံး အကုန်အလုပ်လုပ်တယ်။ဆိုင်မှာသွားပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် အာ မရိုက်ဘူး။သောက်ချိန်ရောက်ရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆယ်မိနစ်ခန့်နားပြီးသောက်တယ်။
သူဌေးအလုပ်က ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းအဝင်အထွက်ပစ္စည်းအားလုံးခေါင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ဆိုင်သမားနဲ့အသက်ကပစ္စည်းရှိရမယ်။စစ်သားရဲ့အသက်က ကျည်ဆံရှိရမယ်လို့အမြဲပြောတဲ့ သူဌေးရဲ့စကား။
ဆိုင်မှာလာအားပေးသူအားလုံးကို နည်းနည်း များများပျူငှာသောဆက်ဆံရေးနဲ့ကြိုဆိုတယ်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ စာရင်းအင်းရှိတယ်။ဆိုင်ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တစ်ပတ်စာ အရောင်းအဝယ်စာရင်းကို ပြန်စစ်တယ်အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင် ကုန်သည်ထံချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပေးတယ်။(မှားခဲ့တာတော့ ရှားပါတယ်)
ဆိုင်မှာသူဌေးတစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်။သူဌေးသားတွေလည်း အလုပ်သမားတွေနဲ့တန်းတူအလုပ်လုပ်ရတယ်။အောက်သက်ကျေအောင် အလုပ်သမားဘဝကိုစာနာတတ်အောင်လုပ်ခိုင်းထားတော့ သူဌေးသားတွေလည်း အလုပ်သမားနဲ့တန်းတူညီအကိုလိုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်တော့ အလုပ်ထွက်သူမရှိဘူး။တရုတ်နှစ်ကူးလိုအချိန်ရောက်ရင် ဘောက်ဆူးပေးတာ အလုပ်သမားရဲ့လခ တနှစ်စာလောက်ရှိတယ်။ဆိုင်ရဲ့အလုပ်သမားရဲ့လုပ်သက်ဟာ ကျွန်တော်အလုပ်စဝင်တုန်းကမေးကြည့်တာ ဆယ်နှစ်အောက်မရှိဘူး။
ဒီနေ့ပိုက်ဆိုင်မှာ ပိုက်ခေါင်းတစ်ခုသွားဝယ်တော့ သူဌေးကတော်က TVကြည့်နေတယ်သူဌေးလို့ထင်ရတဲ့ကောင်ကဖုန်းပွတ်နေတယ်။ပစ္စည်းသွားဝယ်တော့မှ ထချင်သလိုမ ထချင်သလိုနဲ့ထသွားပြီး ပစ္စည်းရှာတာငါးမိနစ်ကြာတယ်။ပြီးမှ ကုန်နေတယ်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်တာ တစ်ခုထဲ။ကျွန်တော်ဘာသာခြားဆိုင်ရောက်တယ်။ချက်ခြင်းထယူပေးတယ်။ငွေရှင်းတော့ ကျေးဇူးအထပ်ထပ်တင်ကြောင်းပြောတယ်။ဘာကွာသလဲ။ဒီဘာသာခြားဆိုင်က စဖွင့်ချိန်မှာ သေးသေးလေး။အခုအတော်ကြီးလာပြီ။မကြာမီ ထပ်ကြီးလာတော့မယ်
သူတစ်ပါးကြီးပွားလာတာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်။ဒီအချိန်ရောက်မှ လူမျိုးခြားတွေ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတယ်ပြောလို့မရ။မြန်မာတွေကြီးပွားချင်ရင်တော့ ဒီဂါထာလေး နေ့တိုင်းရွတ်။
Credit – Nyunt Han Smo
[Unicode]မွနျ မာတှေ ဘာကွောငျ့ ဆိုငျပွု တျ သ လဲ ????
လူမြိုးခွား ဘာသာခွားတှဆေိုငျလုပျငနျးလုပျတယျ။လေး ငါးနှဈကွာတဲ့အခါဆိုငျခှဲတှထေပျဖှငျ့နိုငျတယျ။
လုပျငနျးအထိုငျကွလို့ ဆယျ့ငါးနှဈလောကျကွာရငျ ဆိုငျခှဲအနညျးဆုံးသုံးခုဖွဈသှားပွီ။
မွနျမာဆိုငျနဲ့ဘေးခငျြးယှဉျလာဖှငျ့ရငျ မွနျမာဆိုငျ သိပျမကွာခငျပွုတျပွီးပွေးရပွီ။
အလုပျခြိနျတိကတြယျ။ဆိုငျပိတျခြိနျတဈခါတဈရံမှာသာနောကျကတြယျ။နယျအျောဒါမြားလို့ ဒီနဝေ့ငျတဲ့အျောဒါ ဒီနအေ့ပွီးထုတျတယျ။နကေူ့းရငျ နောကျနအေ့ျောဒါတှထေပျပွီး ဂမျြးမဖွဈစဖေို့ပါ။
သူဌေးကအစ အလုပျသမားအဆုံး အကုနျအလုပျလုပျတယျ။ဆိုငျမှာသှားပွီးလကျဖကျရညျဆိုငျထိုငျ အာ မရိုကျဘူး။သောကျခြိနျရောကျရငျ လုပျငနျးခှငျမှာ ဆယျမိနဈခနျ့နားပွီးသောကျတယျ။
သူဌေးအလုပျက ဆိုငျရဲ့ပစ်စညျးအဝငျအထှကျပစ်စညျးအားလုံးခေါငျးထဲမှာ ရှိတယျ။ဆိုငျသမားနဲ့အသကျကပစ်စညျးရှိရမယျ။စဈသားရဲ့အသကျက ကညျြဆံရှိရမယျလို့အမွဲပွောတဲ့ သူဌေးရဲ့စကား။
ဆိုငျမှာလာအားပေးသူအားလုံးကို နညျးနညျး မြားမြားပြူငှာသောဆကျဆံရေးနဲ့ကွိုဆိုတယျ။
တိကမြှနျကနျတဲ့ စာရငျးအငျးရှိတယျ။ဆိုငျပိတျရကျ တနင်ျဂနှနေတေို့ငျး တဈပတျစာ အရောငျးအဝယျစာရငျးကို ပွနျစဈတယျအမှားအယှငျးရှိခဲ့ရငျ ကုနျသညျထံခကျြခွငျးအကွောငျးကွားပေးတယျ။(မှားခဲ့တာတော့ ရှားပါတယျ)
ဆိုငျမှာသူဌေးတဈယောကျဘဲရှိတယျ။သူဌေးသားတှလေညျး အလုပျသမားတှနေဲ့တနျးတူအလုပျလုပျရတယျ။အောကျသကျကအြေောငျ အလုပျသမားဘဝကိုစာနာတတျအောငျလုပျခိုငျးထားတော့ သူဌေးသားတှလေညျး အလုပျသမားနဲ့တနျးတူညီအကိုလိုဖွဈပွီး လုပျငနျးခှငျမှာပြျောတော့ အလုပျထှကျသူမရှိဘူး။တရုတျနှဈကူးလိုအခြိနျရောကျရငျ ဘောကျဆူးပေးတာ အလုပျသမားရဲ့လခ တနှဈစာလောကျရှိတယျ။ဆိုငျရဲ့အလုပျသမားရဲ့လုပျသကျဟာ ကြှနျတျောအလုပျစဝငျတုနျးကမေးကွညျ့တာ ဆယျနှဈအောကျမရှိဘူး။
ဒီနပေို့ကျဆိုငျမှာ ပိုကျခေါငျးတဈခုသှားဝယျတော့ သူဌေးကတျောက TVကွညျ့နတေယျသူဌေးလို့ထငျရတဲ့ကောငျကဖုနျးပှတျနတေယျ။ပစ်စညျးသှားဝယျတော့မှ ထခငျြသလိုမ ထခငျြသလိုနဲ့ထသှားပွီး ပစ်စညျးရှာတာငါးမိနဈကွာတယျ။ပွီးမှ ကုနျနတေယျပွောတယျ။ကြှနျတျောဝယျတာ တဈခုထဲ။ကြှနျတျောဘာသာခွားဆိုငျရောကျတယျ။ခကျြခွငျးထယူပေးတယျ။ငှရှေငျးတော့ ကြေးဇူးအထပျထပျတငျကွောငျးပွောတယျ။ဘာကှာသလဲ။ဒီဘာသာခွားဆိုငျက စဖှငျ့ခြိနျမှာ သေးသေးလေး။အခုအတျောကွီးလာပွီ။မကွာမီ ထပျကွီးလာတော့မယျ
သူတဈပါးကွီးပှားလာတာ အကွောငျးမဲ့မဟုတျ။ဒီအခြိနျရောကျမှ လူမြိုးခွားတှေ စီးပှားရေး လကျဝါးကွီးအုပျထားတယျပွောလို့မရ။မွနျမာတှကွေီးပှားခငျြရငျတော့ ဒီဂါထာလေး နတေို့ငျးရှတျ။
မောင်တောတွင် ရဲတပ်သားအချင်းအချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီး လက်ပစ်ဗုံးပစ်ဖောက်၊ တဦးသေ တဦးဒဏ်ရာရ
မနက်ဖြန် မေလ ၂ရက်နေ့မှာ မုန်တိုင်းငယ် ကျရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထား